Kheyraadka loogu talagalay Ganacsatada St. Louis • DutchtownSTL.org
Kheyraadka Ganacsiyada Dutchtown
Inkastoo DT2 • Downtown Dutchtown waxay balaarisay hadafkeeda oo ah inay noqoto un urur ganacsi, wali waxaan higsaneynaa inaan siino inta ugu macquulsan ganacsiyada yar yar ee xaafadeena. Uruurinta ilaha hoos ku qoran ma ahan liis dhammaystiran, laakiin waxay ku siin karaan jihada bilowga ama socodsiinta meheraddaada.
Raadinta Magaalada St. Louis xafiisyada kala duwan ee xafiisyada waxay noqon kartaa caqabad. Hoos waxaan ku soo dari doonnaa xiriiro iyo tilmaamo xafiisyada qaarkood oo aad u maleyneyso inaad la macaamili doonto markaad ka shaqeyneyso ganacsi magaalada St. Xafiisyada badankood waxay ku yaalliin Hoolka Magaalada ee Suuqa Wadada iyo Tucker Boulevard, iyadoo saacadaha xafiisku furan yihiin 8da subaxnimo ilaa 5ta galabnimo Isniinta ilaa Jimcaha.
Xarunta Caawinta Ganacsiga
Magaalada Xarunta Caawinta Ganacsiga waa meheraddaada hal joogsi marka aad u baahan tahay caawimaad ka soo degidda dhulka. Waxay kaa caawin karaan inaad diiwaangeliso meheraddaada, maareyso xisaabaadkaaga canshuurta, inaad hesho rukhsad, iyo in ka badan. Waxaad ku codsan kartaa foomamka loo baahan yahay boostada ama emaylka, ama BAC shaqaaluhu waxay kaa caawin doonaan inaad ku dhex socotid Xarunta Dawladda Hoose markaad doorbideyso inaad si shaqsi ah u booqato.
Telefoonka BAC: (314) 622-4120
Xafiiska BAC: Aqalka Magaalada, Qolka 421
Dhammaan ganacsiyada ku yaal Magaalada St. Louis waxaa looga baahan yahay inay haystaan ​​rukhsad ganacsi oo hadda jirta. Kuwaas waxaa soo saaray Xafiiska Shati-qaataha. Ka sokow liisanka aasaasiga ah, haddii kale loo yaqaan Shatiga Ganacsiga Qalin-jabiyay, waxaa jira in ka badan labaatan shatiyada qaaska ah in noocyada meheradaha qaarkood — makhaayadaha, xanaano maalmeedyada, qandaraasleyaasha, iyo inbadan - ay tahay inay sii wadaan marka lagu daro liisankooda joogtada ah
Telefoonka Shati Ururiyaha: (314) 622-4528
Xafiiska Shati Ururiyaha: Aqalka Magaalada, Qolka 104
The Ururiyaha Dakhliga uruuriyaa oo la socotaa dhowr nooc oo canshuuro ah oo la xareeyay oo ay bixiyeen ganacsiyada. Si loo helo ama loo cusbooneysiiyo shatiga ganacsiga, canshuuraha oo dhan waa inay ahaadaan kuwo hadda socda - koontadaadu waa inay furnaataa oo ay firfircoon tahay, waana in canshuurahaaga si buuxda loo bixiyaa.
Dhammaan hay'adaha ka ganacsada Magaalada waxay ku xiran yihiin 1% cashuurta dakhliga faa iidadooda saafiga ah. Intaa waxaa sii dheer, ganacsiyada leh shaqaalaha waxaa looga baahan yahay inay ka celiyaan canshuurta dakhliga ka soo gala mushaharka shaqaalahooda sidoo kalena ay bixiyaan canshuurta kharashka mushaharka ee 0.5%.
Dakhliga emailka: KasbashadaTaxCOR@stlouis-mo.gov
Dakhliga taleefanka: (314) 622-3291
Xafiiska canshuuraha Aqalka Magaalada, Qolka 410
Canshuurta Hantida Qofka
Ha u oggolaan in magaca uu ku khiyaaneeyo - ganacsiyada ayaa ku habboon cashuurta hantida shaqsiyeed baabuur kasta, qalabka wax soo saarka, ama hanti kale oo ay leedahay meheraddu. Canshuurta hantida shaqsiyadeed ee ganacsiga waxaa go'aamiya Xafiiska Qiimeeyaha waxaana ururiyey Ururiyaha Dakhliga.
Iimaylka hantida shaqsiyeed: PersonalPropertyDept@stlouis-mo.gov
Taleefanka cashuurta hantida: (314) 622-4111
Xafiiska canshuuraha guryaha: Aqalka Magaalada, Qolka 109
Ogolaanshaha Shaqada ee Ganacsiyada
Inta badan ganacsiyada Magaalada waxay u baahan doonaan a ogolaanshaha degitaanka ganacsiga booska ay ka shaqeeyaan. Ogolaanshaha degitaanka waxaa laga soo Qeybta Dhismaha ee Waaxda Amniga Dadweynaha. Oggolaanshahaagu wuxuu ku xiran yahay kormeerka dhismaha, makaanikada, tubooyinka, iyo kormeerayaasha korantada iyo sidoo kale dab damis, laakiin markii aad hesho rukhsaddaada, way shaqeynaysaa illaa ganacsigu gacmaha is beddelayo.
Xitaa haddii aad si fudud ganacsi uga wado gurigaaga, waxaad weli u baahan tahay rukhsad degenaansho, in kasta oo aan lagugu sameyn karin kormeerka. Oggolaanshahan waxaa loogu yeeraa Ka-dhaafidda Shaqada Guriga, waxaadna ka heli kartaa rukhsaddaas Qaybta Dhismaha.
Qaybta Dhismuhu waxay kaloo qabataa tiro ka mid ah noocyada kale ee rukhsadaha, oo ay kujirto ruqsadaha dhismaha waa inaad ubaahantahay inaad kubadasho goobta ganacsigaaga.
Taleefanka Qaybta Dhismaha: (314) 622-3313
Xafiiska Qaybta Dhismaha: Aqalka Magaalada, Qolka 425
Makhaayadaha waxay u baahan doonaan dheeri ah ruqsadaha, kormeerka, iyo shahaadooyinka. Intooda badan kuwaas waxaa maamula Magaalada St. Louis Waaxda Caafimaadka, sida kormeerayaasha caafimaad ee joogtada ah ee aasaaskaagu ku xirnaan doono.
Taleefanka Waaxda Caafimaadka: (314) 657-1539
Xafiiska Waaxda Caafimaadka: 1520 Wadada Suuqa, Qolka 4051
Haddii aad qorsheyneyso inaad iibiso aalkolo si aad ugu isticmaashid goobta ama aad u baakadeysatid inaad tagtid, waxaad u baahan doontaa mid ama in ka badan shatiyada khamriga ka Qeybta Canshuuraha ee Waaxda Amniga Dadweynaha. The habka codsiga waxay noqon kartaa wax yar oo culeys ah, markaa u diyaar garow casharro qaarkood iyo dhibaatooyinka ka imaan kara intaad socoto
Qeybta 'Excise Division' taleefanka: (314) 622-4191
Xafiiska Qaybta Cashuuraha: Aqalka Magaalada, Qolka 418
Aasaasiyado Dheeraad ah oo Bilaabaaya Ganacsigaaga
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee aad u baahan tahay markaad ganacsi bilowdo waa lambarrada aqoonsigaaga canshuurta. Waad awoodaa dalbo aqoonsi canshuur federaal ah (sidoo kale loo yaqaan Lambarka Aqoonsiga Loo-shaqeeyaha, ama EIN) websaydhka IRS.
Haddii aad shaqaale leedahay ama aad wax iibineyso, waxaad sidoo kale u baahan doontaa lambarka Aqoonsiga canshuurta gobolka. Dalbo aqoonsi cashuur oo Missouri ah oo wax ka ogow canshuuraha gobolka ee kala duwan oo ku taal Waaxda Dakhliga Missouri websaydhka.
Xoghayaha Gobolka Missouri wuxuu hayaa a liiska foomamka si aad u diiwaangeliso magacaaga ganacsi (haddii kale loo yaqaan magac khayaali ah), fayl garee maqaalladaada ku darista, iyo in ka badan.
DT2 iyo DutchtownSTL sidoo kale waxay rabaan inay kaa caawiyaan inaad suuq geyso ganacsigaaga. Nala soo xiriir ku saabsan dhacdooyinkaaga gaarka ah iyo iibkaaga waxaanan ku horumarin karnaa ganacsigaaga adoo adeegsanaya boggeena internetka iyo kanaalada warbaahinta bulshada. Adigana waa lagugu dari karaa kuweena Tusaha Goobaha Dutchtown kaas oo ka caawiya dadka inay helaan ganacsiyo ka taageera Dutchtown.
Waxaan sidoo kale helnay xirmooyin soo dhaweyn ah oo aan ku faraxsanahay inaan la wadaagno ganacsiyada cusub iyo kuwa hadda jira, waxayna la yimaadeen Taageerada daaqada Dutchtown Businesses si ay u muujiso taageeradaada naftaada iyo milkiilayaasha meheradaha aad deriska la tahay. Nala soo xiriir haddii aad taqaanid ganacsi adeegsan kara baakad.
Kheyraadka Inta lagu jiro COVID-19
Wada-hawlgalayaashayada at Xiriirka Wadada Weyn ee Missouri waxay ururinayaan tiro ka mid ah ilaha ganacsiga ee ka shaqeeya cudurka faafa ee COVID-19. Waxaan sidoo kale dhowaan daabacnay macluumaad ku saabsan deeqo ay heli karaan milkiileyaasha ganacsiyada yaryar ka yimid Magaalada St. Waxaan ku sii cusbooneysiin doonnaa boggaas Dutchtownstl.org/grants.
Hagayaasha Walkthrough si ay kaaga caawiyaan meheraddaadu inay guuleysato
DutchtownSTL waxay abuurtay a talaabo talaabo talaabo ah si ganacsigaaga loogu qoro Google, oo leh fiidiyow iyo tilmaamo qoraal ah. Waxaan haynaa hageyaal badan oo qorshaysan. Ma jiraa hage aad jeceshahay inaad aragto? Aan ogaano.
Waxaan balaarin doonnaa liiskan markii aan la kulanay ilo badan oo aan wadaagno. Haddii ay jiraan wax aad jeclaan lahayd inaad aragto lagu daray, fadlan nala soo xiriir. Waxaan sidoo kale daabici doonaa tilmaamo waxtar leh oo kaa caawinaya inaad bilowdo ama aad kobciso ganacsigaaga. Hubso inaad dib u hubiso dutchtownstl.org/business si aan u aragno waxa aan bixinno si aan u taageerno ganacsiyadayada Dutchtown.
DutchtownSTL.org Taageerida Ganacsiyadeena Dutchtown Kheyraadka Ganacsiyada Dutchtown